I-Walnut Peptide Powder-Umzi-mveliso woMenzi
I-walnut peptide powder yi-walnut i-peptide encinci etyebileyo kwiindidi ezili-18 ze-amino acid kunye neeminerali ezahlukeneyo ngokusebenzisa ikuki ye-walnut njengezinto ezingavuthiyo kunye nobushushu obuphantsi obunzima be-enzymatic hydrolysis kunye namanye amanyathelo nge-biotechnology.
Ividiyo yeWalnut Peptide Powder
Ukubalulwa komgubo wePeptide wePowide
Igama lemveliso Umgubo wePeptide wePowide
Inani leCAS N / A
I molecular WSibhozo <1000u
umbala Umthi omthubi okanye omthubi tyheli
Sisibetho Tukushisa Gcina kubushushu begumbi kwaye kufuneka ibekwe kwindawo epholileyo neyomileyo
Aukuguquka Ukutya, ukutya okunonophelo olusempilweni, ukutya okusebenzayo
Yintoni i-Walnut Peptide powder?
Ubunzima be-molekyuli ye-walnut peptide powderis engaphantsi kwe-1000u, kunye nenxalenye yeprotheni ye-hydrolyzate inokufikelela kwi-90%, ekulula ukuyifumana ngumzimba womntu. Inokunyibilika kwamanzi elungileyo, i-emulsification kunye nomsebenzi we-biological.
Okwangoku, i-millet oligopeptide powder yayisetyenziselwa ikakhulu icandelo lokutya nokhathalelo lwempilo.
Zithini izibonelelo zeWalnut Peptide powder?
Millet oligoIphucula ukufunda kunye nokukhumbula
I-walnut peptide powder ingenza ukuba iiseli zecortex ye-cerebral ibe namandla, zikhuthaze imetabolism yethishu yobuchopho, zibuyisele ukusebenza kweeseli zengqondo, kunye nokuphucula ukusebenza kwengqondo kunye nememori.
Nciphisa uxinzelelo lwegazi
I-walnut peptide powder inokunyusa i-ACE inhibition rate kwi-vivo, ukunciphisa ngempumelelo imveliso ye-angiotensin ll, ngaloo ndlela ifezekisa isiphumo sokunciphisa uxinzelelo lwegazi.
Ukuthintela isifo sika-Alzheimer
I-walnut peptide powder ine-neuroprotective kunye ne-antioxidant iipropathi ezinokuthi zisebenzise ngokufanelekileyo ii-radicals zasimahla, ziphucule umsebenzi we-antioxidant enzyme, lawula izinto ezichasayo. Yinto ekhuselekileyo nexabisekileyo ukukhusela nokunyanga isifo i-Alzheimer's.
Ukuphucula amajoni omzimba
I-walnut peptide powder inefuthe elomeleleyo le-antibacterial elinokuthi lithintele ngokufanelekileyo inani leekoloni zebhaktheriya eziyingozi kunye nokukhusela umzimba womntu kwiikholoni eziyingozi. Kwangelo xesha, i-walnut peptide inokuphucula amandla e-phagocytic yeeseli ze-phagocytic kunye nokuphelisa iiseli ze-apoptotic, inkunkuma ye-metabolic kunye neeseli zentsholongwane eziyingozi.
Uvavanyo / ukufundwa kweSicatshulwa seWalnut ekuphuculeni ukuFunda kunye neMemori kwiimpuku
I-Enzymatic Hydrolysis yee-Walnut Protein ukulungiselela i-ACE Inhibitory Peptides kunye neZakhiwo zabo eziSebenzayo.
Isifundo ngongenelelo lwe-eftect ye-walnut peptide kwimodeli yovavanyo lokudaka kwengqondo kwi-vivo nakwivir.
Umsebenzi we-Antibacterial weWalnut Hydroly-sate.